विमान दु’र्घटना भए’को ३६ दिनसम्म पाइलट जिउँदै ! गोही र सर्प भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण २६, २०७७ समय: २३:५४:१४
काठमाडौं। विमान दु’र्घटना’मा मृ’त्यु’लाई धो’का दिएका एक जना पाइलट गोही र सर्प भरिएको जंगलमा ३६ दिनसम्म जीवितै रहन सफल भएका छन् । गोही र सर्प भरिएको अमेजनको डरलाग्दो जंगलमा दुर्घ’टनाग्र’स्त भएको विमानका ती पाइलट एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चराका अण्डा र जंगली फलफुल खाएर जीवित रहन सफल भए । द सनको रिपोर्टअनुसार बेपत्ता भएका ३६ वर्षमा एन्टोनियो सेनाको उनी हराएको ५ हप्तापछि नाटकीय खोजी र उद्धार अभियानको सहयोगमा सोमबार आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन भएको छ । सेनाले २८ जनवरीमा ब्राजिलको पारा राज्यको अलेन्क्वेरबाट विमान उडाएका थिए । लगत्तै उनी बेप’त्ता भएका थिए । शं’कास्प’द प्राविधिक गडबडीपछि सेनाले विमानलाई जंगलमा आपतकालीन अवतरण गराएका थिए ।